Izindlela Ezi-6 Zokuvuselela Okuqukethwe Okudala | Martech Zone
Izindlela Ezi-6 Zokuvusa Okudala Okuqukethwe
NgoLwesine, ngo-Okthoba 23, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Esinye sezeluleko engivame ukukunikeza izinkampani indlela yokuvuselela okuqukethwe okudala ukushayela ithrafikhi entsha. Uma ngabe ubhuloga isikhathi eside, unokuqukethwe okuningi okuhle - futhi okuningi kwakho kusengasebenza kubafundi. Akunasizathu sokuthi ungakwazi ukuvusa lokhu okuqukethwe ukwakha ithrafikhi yesiza sakho bese uqhuba ibhizinisi enkampanini yakho.
Izindlela Ezi-6 Zokuvusa Okuqukethwe
Ngokuthunyelwe kwakho okulandelayo: Ngabe uke ubheke kokuthunyelwe okudala kokuthunyelwe kwakho kwakamuva? Kungani kungenjalo? Uma ubhale okuqukethwe okuhle okusebenza kokuthunyelwe kwamanje, kufanele uphonsa isixhumanisi lapho. Ngokwengeziwe, ungafisa nokungeza i-plugin ephathelene nokuthunyelwe (i-plugin yami eyintandokazi ye-WordPress ehlobene nayo empeleni itholakala lapha). Ukuhlinzeka ngokuthunyelwe okuhlobene nakho kungavusa okuthunyelwe kusuka zombili izinjini zosesho (ngoba unesixhumanisi ngekhasi lakho lasekhaya) futhi wandise amakhasi akho ngokuvakashelwa kusayithi.
Ngama-Injini Wokusesha: Thenga ukubhalisela usuku olulodwa ku- I-SEOpivot. Gijimisa umbiko ubhekise kubhulogi yakho futhi uzonikezwa uhlu lokuthunyelwe ngamagama asemqoka afanele okutholelwe lokhu okuthunyelwe. Lungiselela isihloko seposi, incazelo ye-meta namagama ambalwa okuqala wokuthunyelwe ukufaka amagama angukhiye uphinde ushicilele. Uma nje une-plugin ye-Sitemap efakiwe, lokhu kuzokwazisa injini yokusesha ngenguquko bese okuthunyelwe kwakho kuzokhonjwa kabusha, okungenzeka kube sezingeni elingcono kakhulu.
Ngokusebenzisa Twitter: Kunama-tweetin amaningi aqhubekayo. Kungenzeka ukuthi ukhule okulandelayo kancane kusukela ugcine ukuthumela i-blog post ku-Twitter ukuze wabelane nenethiwekhi yakho. Yimemezele futhi (kodwa abalandeli mabazi ukuthi bekuyitweet), ngokusho… “Lokhu bekungukuthunyelwe kwami ​​okudume kakhulu ngenyanga edlule ku- [faka isihloko]. Ukube abantu bebengazange bayifunde, kungenzeka manje!
Ngokusebenzisa StumbleUpon: Akufanele nje uphakamise okuqukethwe kwakho kuStumbleUpon… kufanele ubambe iqhaza emphakathini futhi ukhubekise namanye amasayithi futhi (ngeke uzisole… Ngithole imithombo epholile lapho). Kodwa-ke, ngezikhathi ezithile, ukukhuthaza okuqukethwe okudala okungakaze kube khona ukhubeka ngaphambili kungashayela ithrafikhi enkulu.
Ngokusebenzisa Facebook: Amakhasi e-Facebook namaphrofayli akho kuyindawo enhle yokuphinda uthumele okuqukethwe okudala okusasebenza. Ukusakazwa kwe-Facebook yilokho nje… umfudlana… futhi uma ulinda isikhashana, ungaphinda wethule okuqukethwe okuhle emuva ekusakazweni futhi ukukhiqize ukunakwa okuningi futhi.
Ngokusebenzisa Google: Ungabalaleli umphakathi omncane kodwa ozinikele wezingxoxo ezenzeka ku-Google +. Ngoba abantu abambalwa ababambe iqhaza kuyo empeleni kunikeza wena ithuba elingaphezulu lokutholakala futhi kwabelwane ngalo kulowo mphakathi!
Uma une-blog enokuqukethwe okuningi okuhle, ukuvusa okuqukethwe kufanele kube isu eliqhubekayo lakho. Ukududula okuqukethwe okudala okudala kubuyele kokugqamile kungashayela ithrafikhi eningi eyengeziwe ebhizinisini lakho. Khetha mayelana nokuqukethwe okukhuthazayo futhi ungadluli abalandeli bakho bamanje, abalandeli nababhalisile ngokuphindaphindiwe okuningi ... kepha unganqikazi ukukhuthaza okuthunyelwe okuthandwa ukukuvusa. Uzomangala ukuthi okuqukethwe ezindala kungaba yigugu kangakanani!
Tags: FacebookGoogle +okuqukethwe okudalavusa okuqukethweuvuselele okuqukethweizinjiniTwitter
Izindlela ezihamba phambili zekhasi lokufika: Ungakusebenzisa kanjani ukuguqulwa
I-WiFi ezimotweni? I-Auto Industry Ayingiqondi
I-Oct 27, i-2014 ku-9: i-32 PM
UDouglas, angikaze ngicabange ngeStumbleUpon. Cabanga ukuthi lokhu kuyinsiza enkulu futhi uzobe uphenya ngokuqhubekayo. Ngithanda neseluleko esilula sokuxhumanisa emuva kuma-athikili adlule, isinyathelo esilula kanjalo esivame ukunganakwa.